Indlela yokwenza imali yimali ngo-2013?
Ibhizinisi, Namathuba webhizinisi
Namuhla, cishe wonke umuntu unezizathu ezithile lokonga imali esitolo, cabanga indlela imali okwenza imali. Omunye ongakhetha ebaluleke kakhulu lolu hlelo ubhekwa ibhizinisi. Kuyinto imfihlo ukuthi unomusa inzuzo okwamanje yezinzuzo kahle. Kungani-ke ibhizinisi? Yebo, impendulo silula - ngoba uma iqhathaniswa nezinye amasimu umsebenzi lo mugqa ukhiqiza cishe 50% enzuzweni evela lemali utshalomali. Lolu hlobo ukuqeqeshwa inikeza ithuba nje kuphela ukuthola imali njengoba ibhizinisi futhi ivumela umuntu ukuceba, cishe ungenzi lutho. Ukuze bathole imali enhle ebhizinisini kukhona uhlelo umsebenzi lapho abantu angazuza ngaphandle ngisho benomuzwa wokuthi ukusebenza.
Wonke umuntu aphila kulo mhlaba, ngaso sonke isikhathi, cabanga ngendlela yokwenza imali yimali. Omunye okukhethwa best bekuyobhekwa njengento utshalomali zimali sika kunoma iyiphi ibhizinisi noma ukuhweba emakethe lwemali, kona okungaholela ukuletha inzuzo eliphakeme.
Abanye abantu baze bacabange okuningi ngokuthi singalithola kanjani ukwenza imali engapheli. Libuye ukuhlela akunzima kakhulu, kodwa kudingeka babe dolobha yaso, okuyinto esigabeni sokuqala kumiswa nomholo yethu sizoba ukutshala izimali zami kule uhlobo oluthize ibhizinisi ngempumelelo. It luyokhula ngenyanga ngalunye oludlulayo, bayanda, kulesi simo kungaba ephakeme kunaleyo imali yayo, eqinisekisa nokukhuphula inzuzo yethu. Uma ibhizinisi ezifana unyaka owodwa kuzokhuphula inani abasebenzi bayo abasebenza ingxenye - kungcono kusho ukuthi inhlokodolobha sakho siyobe kabili. Lokhu uzokwenza kokutshalwa kwezimali kunoma yiliphi ibhizinisi, okuzothi ngesinye kabili imali yakho. Phinda le nqubo izikhathi eziningana, uzoba hhayi kuphela umuntu aphumelele, futhi uzokwazi ukuzimela ngokuphelele bangabi ngaphansi umsebenzi, nemali eyanele yokuzinakekela kuqala, futhi angikaze ngeke kudingeke.
Abaningi e umbuzo indlela yokwenza imali yimali, ukuhlangabezana - nganoma iyiphi indlela, noma nakakhulu - belulekwa ukuba uvule idiphozi ebhange bese ulinda buthelela isithakazelo ngokwanele. Isiphakamiso ubhekwa omunye the okungenangqondo kakhulu, kusukela ukuntengantenga yesimanje zezimali akuyona into akuqinisekisi inzuzo, lokho akusho ngisho ukunikeza ephelele, isivikelo amafa akho ukusuka kunoma iyiphi kwamandla emali. Kodwa izimali ezitshaliwe empumelelweni inkampani, noma kunjalo, ukuletha inzuzo, futhi ngaso sonke isikhathi kuyoba ngaphansi kokulawula kwakho.
Namuhla, kunamabandla amaningi kakhulu izinto ezahlukene ongazikhetha indlela yokwenza imali yimali, kodwa kunalokho inani elikhulu iziphakamiso ezinjalo lakhelwe inzuzo sohlangothi olulodwa. Ngakho it is batusa kakhulu ukuthi uqaphele kakhulu inqubo ongakhetha isinqumo nande-dolobha yawo. Sithemba ukuthi uzonikwa ulwazi olwanele ukuphendula kahle umbuzo zendlela yokwenza imali.
1c ezishintshayo umsebenzi HOA.
Ikakhulukazi izimoto wesitimela zokuthwalwa auto-Russian
Yini umsebenzi bathi: kanjani inzuzo ebhizinisini manje ivulekele?
Imodeli yebhizinisi: 8 amaphuzu endleleni eya empumelelweni
Ibhizinisi Analyst: musa uludinga?
Phezulu 10 izindlela zomthetho ukwenza imali ekhaya
Uchungechunge oluthi "Padre Coraje": nabalingisi izindima
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini kazwelonke epaki reserve and endaweni yakithi?
Isilinganiselwa iwashi brand ngokuvumelana 2013
Ifomethi hlela PDF
Yokululama - kuyinto ... Trigonometry yokululama. izinhlobo yokululama
Anastasia Reshetova ukuze Plastics. Biography emfushane, ukuphila siqu Anastasia Reshetova
Yiziphi izitho okhalo. Pathology kwazo lezi zitho
Umqondo, imigomo, izinjongo, izisebenzi core isitifiketi. Ukuqinisekisa abasebenzi - kungcono ...
Yini ukupheka lo ukugxusha nendlela engcono silisebenzise etafuleni?
Styler Babyliss: kuzibuyekezo, izintengo, izincazelo. Babyliss Perfect Ukoma